Uliqala njani ishishini lokuThoba | Martech Zone
Uliqala njani ishishini lokuwisa
NgoLwesihlanu, Meyi 21, 2021 NgoLwesihlanu, Meyi 21, 2021 Douglas Karr
Kule minyaka imbalwa idlulileyo ibinomdla kakhulu koosomashishini okanye iinkampani ezijonge ukwakha ishishini le-ecommerce. Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, ukumilisela iqonga le-ecommerce, ukudibanisa ukuhlawulwa kwakho, ukubala iirhafu zalapha ekhaya, zikarhulumente kunye nezesizwe, ukwakha ukuthengisa okuzenzekelayo, ukudibanisa umnikezeli wokuhambisa ngenqanawa, kunye nokuzisa iqonga lakho lokuhambisa imveliso ukusuka kwintengiso ukuya kunikezelo kuthathe iinyanga kunye namakhulu amawaka eedola.
Ngoku, ukwazisa indawo kwiqonga le-ecommerce njenge Shopify or BigCommerce inokufezekiswa ngeyure kuneenyanga. Uninzi lweendlela zokuhlawula intlawulo ezakhelwe ngaphakathi. Kwaye amaqonga ezinto zokuthengisa zangoku anje Klaviyo, Omnisend, okanye Moosend bholiti ngaphandle kwanto ngaphandle konqakrazo lweqhosha.
Ukuwisa yimodeli yeshishini apho wena, umthengisi, akufuneki ugcine okanye uphathe nasiphi na isitokhwe. Abathengi ba-odola iimveliso kwivenkile yakho ekwi-intanethi, kwaye uxwayise umthengisi wakho. Zenza inkqubo, zipakishe, kwaye zithumele imveliso ngqo kumthengi.
Imarike yokwehla kwehlabathi iya phantse nganye kwi-150 yezigidigidi kulo nyaka kwaye kufanele ngaphezulu kokuphindwe kathathu kwiminyaka emihlanu. I-5% yabathengisi bewebhu batshintshele ukuwisa inqanawa njengeyona ndlela iphambili yokufezekisa iodolo. Ungayichazanga i-27% yeentengiso zeAmazon ezizalisekisiweyo kusetyenziswa i-dropshipper kule minyaka ilishumi idlulileyo!
Ngamaqonga okuwisa njenge UkuprintaUmzekelo, ungaqala ukuyila kunye nokuthengisa iimveliso kwangoko. Akukho sidingo sokuphatha isitokhwe, okanye ukhathazeke ngemveliso ... ishishini lakho lokuwisa ngokulula kukulawula, ukwandisa, kunye nokwazisa iimveliso zakho kwi-intanethi ngaphandle kobunye ubunzima.
Ingcali yoMakhi weWebhusayithi isungule isikhokelo esitsha se-infographic, Uliqala njani ishishini lokuwisa. Isikhokelo se-infographic sisebenzisa amanani akutshanje kunye nophando olusekwe kulwazi oluvela kwiingcali zeDropshipping esithethe nazo. Nantsi into eyigubungelayo:
Kukuthini ukuwisa kunye nendlela esebenza ngayo
Iinkcukacha-manani zamva nje zeMpembelelo zayo
Amanyathelo ama-5 okuQala ishishini lokuDropha
Iimpazamo ezi-3 eziqhelekileyo zokulahla ukuze uziphephe
Ukuqokelela Iintsomi Eziqhelekileyo Zokuwisa
Ezona Pros ziphambili kunye neengozi zokuDropha
Iphela ngokubuza: Ngaba ufanele ulahle?
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco amdibeneyo amaqonga akhankanywe kweli nqaku.
tags: ukuhlaUkuhla kwe-infographicukuhla kwamananikwi-infographicwebwebsakhiwo sokwakha
IfowuniWagon: Yonke into oyifunayo ukuze uphumeze ukuKhangelwa kweFowuni ngeeAnalytics zakho